トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Pachinko efi-trano ny vola amin'ny fitaovana simbasimba Sarotra ny fampihenana ny mpanjifa
■ Inona no manomboka
araka izay rehetra pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny fitantanana, sy ny fampihenana ny baolina mivoaka avy any amin'ny varotra, dia nahoana no mahasoa ny orinasa Miiba ny fandaniana isan-karazany.
lazaina amin'ny teny hafa, raha be loatra ny fandaniana fampiasana ianao, dia ho tapaka ny vola ho nihena ho ny mpanjifa avy amin'ny vola lafo. Tamin'ny fotoana toy izany, ny zava-bitany sy ny mikr? Illuminations, mozika sy ny toy izany, ka hitarika ny sakan'ny Azo inoana fa aoka isika tsy ho voafitaka. Ampidiro ny foto-kevitra lehibe indrindra
, fa misy drenivohitra fampiasam-bola amin'ny iray amin'ireo kaonty ho an'ny lehibe ao amin'ny lanjan'ny vola lany amin'ny Pachinkoya. Koa satria mivoaka dia mety tsy azo hahena amin'ny payout ny mpanjifa sy ny eto be loatra ny fampiasana ny vola, fa tokony hijery toy ny anankiray amin'ny pamantarana.
vao haingana, dia manana mihamaro ny tena stylish pachinko parlors. Fijery dia, mazava ho azy, mandra-pahatongan'ny tapany firavaka tsara sy ny kabine, na tsy pachinko parlors izay mandany vola. Misy ihany koa ny fivarotana izay koa niraikitra tamin'ny trano hafa. Ohatra, mpiasa fanamiana, sary, sns Maro ny seza dia azo ahitsy miakatra sy midina ny haavony. Avy amin'ny fomba fijery ny
pachinko lafiny efi-trano, raha misy na dia ny fanompoana ny mpanjifa ny tanjona, toy ny tarehy toy ny fiarovana ny vehivavy mpanjifa, dia mety manana renivohitra ny fampiasam-bola mba hisarihana mpanjifa tanjona. Ny vokatry ny fampiasam-bola, raha toa ka dia mihazakazaka, satria ny fandikan-teny, izay ihany koa ny varotra, renivohitry ny fampiasam-bola no azo lazaina ho fahombiazana lehibe.
Avy eo, raha miakatra ny varotra, satria mihena ny fandikan-teny dia mety ho ampy ao amin'ny payout ho an'ny mpanjifa, dia ho ny hoe miala pachinko efi-trano madio, dia ho tsy misy hoe roa. Ho iray Renivohitra habetsahan'ny fampiasam-bola, pachinko parlors baolina avy izay misy dia nihazakazaka ao amin'ny antsalany, dia tsy misy olana eo amin'ny pachinko parlors, izay mety mampihena ny tombony.
Fa ny olana ny raharaha noho ny, raha tsy be loatra fandaniana amin'ny fampiasam-bola Renivohitra, dia pachinko efi-trano izay hetsika tsy haharitra koa ny varotra tsy hanitatra. Ho an'ny pachinko toy izany efi-trano, ny vola mifanaraka fampiasam-bola an-drenivohitra, dia ho sitrana fanampiny ilaina na Izany. Koa satria ny vola lany fanarenana dia fandikan-teny sarotra, amin'ny toe-javatra toy izany, tsy misy antony izay afaka Nante fampihenana ny mpanjifa.
ihany koa ny tsara tarehy, toy ny tarehy, pachinko parlors ary mahatsapa amin'ny farany unevenness ao amin'ny payout, raha ny avy amin'ny pachinko efi-trano izay tsy miovaova, azafady jereo ao an-tsaina fa misy ihany koa ny mety hisian'ny fampihenana dia sarotra. Ankoatra izany, ny trano koa ny antitra, na dia maloto-fivarotana tarehy sy kabine, maro ireo efa lany andro pachinko trano izy. Ho an'ny niakatra ho any amin'ny efi-trano pachinko ary koa ireo herim-po ilaina kely miditra, ianao Matetika pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny ela-hampitoerina amin'ny toe-javatra maro. Raha tsy misy mampiasa ny
tarehy, sns, fa ny lalao pachinko miantsena ao amin'ny payout, dia mety tsy ho zara renivohitra ny fampiasam-bola. Noho pachinko parlors madio, na ny payout tsara ihany koa, Mino aho fa amin'ny toe-javatra maro izay mamerina ny tsara. Pachinko fivarotana toy ny tsy mandany vola koa tao Renivohitra fampiasam-bola, dia mety koa tightened payout tsy misy fantsika fanitsiana.
Raha fintinina, fa tena misy ny payout, fantsika be fanitsiana ny fomba tsara, ary hijery ny fiasan'ny ny zava-misy, ireo telo lahy, dia afaka mamantatra ny fampihenana dia azo atao raha toa ny toe-draharaha mifanaraka fampiasam-bola an-drenivohitra . Ary tsara tarehy dia sy dirtiness amin'ny miseho ihany, fa tsy niala avy dia ny hoe tsy misy izany fifandraisana.
renivohitra ny fampiasam-bola te hahita ny tena dia ny ampahany fa na na tsy amboary ny tapaka ireo. Sns ny tapa toka rava trano fidiovana famerana mari-pana, toa tsy afaka manamboatra ny fitarainana ampahany ny, dia tsy misy antony izay afaka Nante fampihenana. Toy ny rava sisa tavela tompon-tany dia matetika ny pachinko efi-trano, heveriko fa tsy misy payout.
Mino aho fa raha azo atao ny ao ireo tantara ireo dia mazava ho azy ny boky, fa ny tena azo antoka ny zavatra mety ho tahirin-kevitra hijery tsy miangatra tsy ho voafitaky ny fivarotana toy ny fandravahana. Ary ny trano ihany koa ny rovidrovitra, antsoina koa hoe maloto-fivarotana tarehy sy kabine, maro ireo efa lany andro pachinko trano izy. Ho an'ny niakatra ho any amin'ny efi-trano pachinko ary koa ireo herim-po ilaina kely miditra, ianao Matetika pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny ela-hampitoerina amin'ny toe-javatra maro. Raha tsy misy mampiasa ny
Mino aho fa raha azo atao ny ao ireo tantara ireo dia mazava ho azy ny boky, fa ny tena azo antoka ny zavatra mety ho tahirin-kevitra hijery tsy miangatra tsy ho voafitaky ny fivarotana toy ny fandravahana. Re fantsika iray ihany fanitsiana tsara, ary hijery ny fiasan'ny ny zava-misy, ny telo izany, dia afaka maminavina fa ny fampihenana ny toe-draharaha raha mifanaraka an-drenivohitra fampiasam-bola atao. Ary tsara tarehy dia sy dirtiness amin'ny miseho ihany, fa tsy niala avy dia ny hoe tsy misy izany fifandraisana.
Mino aho fa raha azo atao ny ao ireo tantara ireo dia mazava ho azy ny boky, fa ny tena azo antoka ny zavatra mety ho tahirin-kevitra hijery tsy miangatra tsy ho voafitaky ny fivarotana toy ny fandravahana.